अब नेपाल अधिराज्यभर वाणिज्य बैंकहरुको शाखा संख्या कति ? – Nepal Journal
अब नेपाल अधिराज्यभर वाणिज्य बैंकहरुको शाखा संख्या कति ?
Posted By: Nepal Journal July 11, 2018 | २७ असार २०७५, बुधबार २०:४७
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रति शाखाबाट औसतमा करीब चार हजार ४९० जनसंख्याले सेवा प्राप्त गर्न सक्ने देखिएको छ । संघीय व्यवस्थाअन्तर्गत गठित ७५३ स्थानीय तहमध्ये यस आवको असार २४ गतेसम्म ५५६ तहमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति पुगेको छ ।
यस आवको वैशाख मसान्तसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुमा रहेको निक्षेप खाता संख्या दुई करोड २५ लाख तथा कर्जा खाता संख्या १२ लाख ८७ हजार पुगेको छ ।
Be the first to comment on "अब नेपाल अधिराज्यभर वाणिज्य बैंकहरुको शाखा संख्या कति ?"